‘Mandehana Manao Mpianatra’ (Matio 28:19) | Gazety Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Aja Akha Albaney Alemà Altaï Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuuk Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Igede Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
LAHATSORATRA FIANARANA 29
“Mandehana ... ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.”—MAT. 28:19.
1-2. a) Araka ny didin’i Jesosy ao amin’ny Matio 28:18-20, inona no tena tanjon’ny fiangonana kristianina? b) Inona no fanontaniana hodinihintsika ato?
NANAO fotoana tamin’ny mpianany teo amin’ny tendrombohitra iray i Jesosy, taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty. (Mat. 28:16) Rehefa tonga tany ireo apostoly, dia azo antoka hoe efa tsy andrin’izy ireo izay hahalalana ny antony niantsoana azy ireo. Tamin’izay angamba i Jesosy no niseho tamin’ny “rahalahy maherin’ny dimanjato.” (1 Kor. 15:6) Nahoana i Jesosy no nanasa an’ireo mpianany ireo mba hihaona taminy? Satria nisy asa miavaka tiany hampanaovina azy ireo. Hoy izy: “Mandehana ... ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.”—Vakio ny Matio 28:18-20.
2 Lasa anisan’ny fiangonana kristianina tamin’ny taonjato voalohany ny mpianatr’i Jesosy naheno an’ireo teniny ireo. Ny hanampy olona betsaka kokoa mba ho lasa mpianatr’i Kristy no tena tanjon’io fiangonana io. * Efa an’aliny izao ny fiangonana kristianina maneran-tany, ary mbola izany ihany no tanjon’izy ireo. Handinika fanontaniana efatra isika ato: Nahoana no tena ilaina ny manao mpianatra? Inona avy no atao amin’izany? Iza avy no mandray anjara amin’ilay izy? Ary nahoana isika no mila manam-paharetana rehefa manao an’io asa io?
NAHOANA NO TENA ILAINA NY MANAO MPIANATRA?
3. Araka ny Jaona 14:6 sy ny 17:3, nahoana no tena ilaina ny manao mpianatra?
3 Nahoana no tena ilaina ny manao mpianatra? Satria ny mpianatr’i Kristy ihany no afaka ny ho naman’Andriamanitra. Dieny izao koa dia efa mihatsara ny fiainan’izay manara-dia an’i Kristy, ary afaka manantena ny hiaina mandrakizay izy amin’ny hoavy. (Vakio ny Jaona 14:6; 17:3.) Tena andraikitra lehibe àry no nankinin’i Jesosy tamintsika! Tsy miady irery anefa isika. Izao mantsy no nolazain’ny apostoly Paoly momba azy sy ny namany: “Mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay.” (1 Kor. 3:9) Hoatr’izany koa isika. Eritrereto ange e! Olombelona tsy lavorary isika nefa omen’i Jehovah sy Jesosy tombontsoa be hoatr’izany!
4. Inona no azontsika ianarana avy amin’i Ivan sy Matilde?
4 Tena mahafaly ny manao mpianatra. Izany no tsapan’i Ivan sy Matilde, mpivady mipetraka any Kolombia. Nitory tamin’ny tovolahy atao hoe Davier ry zareo. Niteny tamin-dry zareo i Davier hoe: “Te hiova aho fa hoatran’ny tsy vitako mihitsy ilay izy.” Mpanao ady totohondry izy, sady nifoka rongony no nisotro toaka be. Nanao tokantranomaso koa izy sy ilay vehivavy niarahany. Erica no anarany. Hoy i Ivan: “Nanomboka nitsidika azy izahay. Tsy maintsy nandeha bisikileta nandritra ny ora maro izahay, satria tany amin’ny tanàna mitokana kely izy no nipetraka. Ny lalana koa feno fotaka be. Hitan’i Erica tatỳ aoriana hoe niova i Davier, dia lasa nianatra Baiboly koa izy.” Rehefa nandeha ny fotoana, dia afaka tamin’ny rongony sy toaka i Davier, ary najanony ilay ady totohondry. Nisoratra koa izy sy i Erica. Hoy i Matilde: “Natao batisa izy mivady tamin’ny 2016, dia tadidiko ilay tenin’i Davier hoe: ‘Te hiova aho fa hoatran’ny tsy vitako mihitsy ilay izy.’ Nitomany mihitsy izahay tamin’izay.” Ho faly be hoatr’izany koa isika rehefa mahavita manampy olona ho lasa mpianatr’i Kristy.
INONA AVY NO ATAO REHEFA MANAO MPIANATRA?
5. Inona no zavatra voalohany ataontsika rehefa manao mpianatra?
5 ‘Mitady’ an’izay olona vonona hianatra momba an’i Jehovah isika. (Mat. 10:11) Izay no zavatra voalohany ataontsika rehefa manao mpianatra. Asehontsika hoe tena Kristianina isika, raha mankatò ny didin’i Jesosy mba hitory. Hita koa hoe tena Vavolombelon’i Jehovah isika, raha mitory amin’ny olona rehetra ao amin’ny faritanintsika.
6. Inona no azontsika atao raha tiantsika hihaino antsika ny olona itoriantsika?
6 Tena te hahalala ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly ny olona sasany. Be dia be koa anefa no hoatran’ny hoe tsy miraharaha amin’ny voalohany. Isika àry no tsy maintsy miezaka mba hahatonga azy ireo ho liana. Raha tiantsika hihaino antsika ny olona, dia mila miomana tsara isika. Ahoana no hanaovana an’izany? Mifidiana aloha hevitra maromaro mety hahaliana ny olona ho hitanao. Omano avy eo ny fomba hampidiranao an’ilay resaka.
7. Ahoana no azonao anombohana resaka? Nahoana no tena ilaina ny mihaino sy manaja ny olona, araka ny hevitrao?
7 Afaka milaza, ohatra, ianao hoe: “Mba te hanontany ny hevitrao aho, azafady. Betsaka amin’ny zava-tsarotra mahazo antsika no mahazo ny olona maneran-tany koa. Mety ho voavaha ve ireny olana ireny raha fitondrana iray ihany no mitondra ny tany manontolo?” Azonao resahina aminy avy eo ny Daniela 2:44. Ity koa misy fomba hafa azonao anombohana resaka: “Inona no fomba tsara indrindra hanampiana ny ankizy hahalala fomba, araka ny hevitrao?” Azonao resahina aminy avy eo ny Deoteronomia 6:6, 7. Na inona na inona anefa hevitra tianao hampitaina, dia eritrereto aloha ny olona mety ho hitanao. Saintsaino, ohatra, hoe inona ny soa ho azony raha mianatra an’izay tena lazain’ny Baiboly izy. Mila mihaino tsara an-dry zareo sy manaja ny fomba fiheviny koa ianao rehefa miresaka aminy. Ho azonao kokoa amin’izay ny zavatra iainany, ary ho vonona hihaino anao kokoa izy.
8. Nahoana no mila fikirizana ianao rehefa miverina mitsidika?
8 Mety handany fotoana be sy hiezaka be hitsidika olona iray ianao, izay izy vao hanaiky hianatra Baiboly. Nahoana? Satria mety tsy ho afaka hiresaka izy na tsy ho ao rehefa tonga any aminy ianao. Tsy maintsy miverina matetika any koa angamba ianao, izay izy vao ho zatra anao dia hanaiky hianatra. Tadidio fa mila tondrahana matetika ny zavamaniry vao hitombo. Hitombo hoatr’izany koa ny fitiavan’ny olona iray an’i Jehovah sy Jesosy, rehefa iresahana matetika momba ny Tenin’Andriamanitra izy.
IZA AVY NO MANDRAY ANJARA AMIN’ILAY ASA?
Ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany no miara-mikaroka an’ireo olona mendrika (Fehintsoratra 9-10) *
9-10. Nahoana isika no milaza hoe ny mpitory rehetra no miara-mitady an’ireo olona tia ny fahamarinana?
9 Ny mpitory rehetra no miara-mitady an’ireo olona tia ny fahamarinana. Azo oharina amin’ny olona mitady ankizy very izany. Eritrereto ange ity zava-nitranga ity e: Tsy hita ny ankizilahikely iray telo taona, dia olona 500 teo ho eo no niara-nitady azy. Tany an-tanin-katsaka izy avy eo no nisy nahita, adiny 20 teo ho eo tatỳ aoriana. Tsy nanaiky hohindrahindraina anefa ilay olona nahita azy. Hoy izy: “Olona an-jatony ange no niara-nitady an’ilay zaza e!”
10 Be dia be koa ny olona mahatsiaro ho very amin’izao, hoatran’io ankizy io. Mitady fanampiana ry zareo, nefa tsy mba misy azony antenaina. (Efes. 2:12) Valo tapitrisa mahery isika izao no miara-mitady an’ireny olona ireny. Mety tsy hahita olona hanaiky hianatra Baiboly ianao ao amin’ny faritaninareo, fa ny mpitory hafa mety hahita. Mety ho liana ilay olona, ary ho lasa mpianatr’i Kristy mihitsy. Rehefa misy rahalahy na anabavy mahita olona hoatr’izany, dia isika rehetra no faly satria samy nandray anjara tamin’ilay fikarohana.
11. Inona no azonao atao mba handraisana anjara amin’ny fanaovana mpianatra, na dia tsy manana mpianatra Baiboly aza ianao?
11 Mbola afaka mandray anjara amin’ny fanaovana mpianatra ianao, na dia tsy manana mpianatra Baiboly aza. Azonao atao, ohatra, ny mandray tsara an’ireo vaovao sy miezaka minamana aminy, rehefa tonga mivory izy ireo. Handresy lahatra azy ireo ianao amin’izay hoe ny fitiavana no amantarana ny tena Kristianina. (Jaona 13:34, 35) Mety hanampy an’ireo vaovao koa ny valin-teninao. Hanome modely ho azy ireo ianao, raha manome valin-teny fohy sy amin’ny fomba fiteninao ary mihevitra ny fihetseham-pon’ny hafa amin’izay lazainao. Afaka miara-manompo amin’ny mpitory vaovao koa ianao, dia manampy azy hampiasa ny Soratra Masina mba hampisaintsainana ny olona itoriany. Hampianatra azy hanahaka an’i Kristy ianao amin’izay.—Lioka 10:25-28.
12. Mila fahaizana manokana ve isika vao ho afaka hanao mpianatra? Manomeza ohatra.
12 Tsy tokony hieritreritra isika hoe mila fahaizana manokana vao ho afaka hanampy olona ho lasa mpianatr’i Jesosy. Eritrereto ny zavatra niainan’i Faustina, anabavy mipetraka any Bolivia. Tsy nahay namaky teny izy tamin’izy nihaona voalohany tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanomboka nianatra namaky teny anefa izy, dia efa mba mahita rirany kely izao. Efa vita batisa izy ary tena tia mampianatra Baiboly. Dimy ny olona ampianariny isan-kerinandro. Marina hoe mbola tsy mahay mamaky teny noho ny ankamaroan’ny mpianany izy. Efa nahavita nanampy olona enina mba hatao batisa anefa izy.—Lioka 10:21.
13. Inona no soa ho azontsika raha manao mpianatra foana isika na dia be atao aza?
13 Be atao ny Kristianina maro satria manana andraikitra lehibe. Mbola mahita fotoana hampianarana Baiboly ihany anefa ry zareo, ary tena faly manao an’izany. Hoatr’izany i Melanie. Any Alaska izy no mipetraka, ary izy irery no mitaiza ny zanany vavy valo taona. Efa miasa tontolo andro izy nefa mbola izy koa no mikarakara ny dadany voan’ny kansera. Mitokana kely ny tanàna misy an-dry zareo, ary izy irery no Vavolombelon’i Jehovah tao. Matetika izy no nivavaka tamin’i Jehovah mba hampiany hazoto hitory na dia mangatsiaka be aza ny andro. Tena te hahita olona vonona hianatra Baiboly mantsy izy. Nihaona tamin’i Sara izy tatỳ aoriana. Faly be i Sara rehefa nampahafantariny azy hoe manana anarana Andriamanitra. Nanaiky hianatra Baiboly izy rehefa nandeha ny fotoana. Hoy i Melanie: “Vizana be aho rehefa zoma hariva, nefa nandeha nampianatra an’i Sara foana izahay mianaka. Tsy nanenenanay izany! Tianay be ny nikaroka ny valin’ny fanontanian’i Sara, dia faly erỳ izahay rehefa lasa naman’i Jehovah izy.” Nisy nanohitra i Sara, nefa be herim-po izy dia nahavita niatrika an’izany. Niala tamin’ny fivavahany izy tatỳ aoriana, dia natao batisa.
NAHOANA ISIKA NO MILA MANAM-PAHARETANA?
14. a) Nahoana ny manao mpianatra no mitovy amin’ny manjono? b) Mandrisika anao hanao inona ny tenin’i Paoly ao amin’ny 2 Timoty 4:1, 2?
14 Ahoana anefa raha hoatran’ny hoe tsy misy vokany ny fitorianao? Aza kivy fa tadidio foana hoe mety mbola hahita olona ho lasa mpianatr’i Jesosy ianao. Nampitovin’i Jesosy amin’ny manjono ny manao mpianatra. Tsy voatery hoe tonga dia mahazo trondro ny mpanjono, fa mila miandry ela be angamba. Miasa alina ry zareo matetika na vao maraina be, ary mila mandeha lavitra mihitsy aza indraindray. (Lioka 5:5) Hoatr’izany koa no ataon’ny mpitory sasany. Miezaka ny hanam-paharetana ry zareo, dia mitory mandritra ny ora maro amin’ny toerana samy hafa sy amin’ny fotoana samy hafa. Nahoana? Amin’izay betsaka kokoa ny olona azony iresahana. Matetika no misy vokany tsara ny ezaka mafy ataon’izy ireny, satria lasa mahita olona liana izy. Sao dia mba afaka manandrana mitory amin’ny fotoana na toerana mety hahitana olona betsaka kokoa ianao?—Vakio ny 2 Timoty 4:1, 2.
Miezaha hanam-paharetana rehefa manampy ny mpianatrao handroso (Fehintsoratra 15-16) *
15. Nahoana isika no mila manam-paharetana rehefa mampianatra Baiboly?
15 Mila manam-paharetana koa isika rehefa mampianatra. Nahoana? Satria tsy ampy ny manampy an’ilay olona hahalala an’izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra sy ho tia an’izany. Mila ampiana koa izy mba hahafantatra sy ho tia an’i Jehovah, ilay nampanoratra ny Baiboly. Tsy izay nasain’i Jesosy ataon’ny mpianany ihany no ampianarintsika azy, fa ny fomba hampiharana an’izany eo amin’ny fiainana koa. Mety hiady mafy izy vao hahavita hampihatra ny toro lalan’ny Baiboly, ka tokony hanam-paharetana isika rehefa manampy azy. Tsy mitovy mantsy ny olona. Misy mahavita manova ny fomba fisainany sy ny fahazarany ao anatin’ny volana vitsivitsy, fa ny hafa indray ela kokoa.
16. Inona no ianaranao avy amin’ny tantaran’i Raúl?
16 Misy vokany tsara ny faharetana. Manaporofo an’izany ny nataon’ny misionera iray tany Peroa. Hoy izy: “Nampianatra Baiboly an’i Raúl aho. Efa nahavita boky roa izahay, nefa mbola niady mafy izy. Niteny ratsy foana mantsy izy, dia nikorontana foana koa ny tokantranony. Na ny zanany aza tsy nanaja azy noho izy ratsy toetra. Nivory foana anefa i Raúl, dia nankany amin-dry zareo ihany aho mba hanampy azy sy ny fianakaviany. Nahafeno fepetra hatao batisa izy, telo taona mahery taorian’ny nihaonanay voalohany.”
17. Inona no horesahina ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
17 Nirahin’i Jesosy isika mba ‘hanao mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.’ Rehefa manatanteraka an’io didy io isika, dia matetika no tafaresaka amin’ny olona tsy mitovy fomba fisainana amintsika mihitsy. Anisan’izany ny olona tsy manana fivavahana na tsy mino an’Andriamanitra. Ahoana no azontsika atao mba hitoriana ny vaovao tsara amin’ny olona hoatr’izany? Izany no horesahina ao amin’ny lahatsoratra manaraka.
Iza avy no mandray anjara amin’ny fanampiana ny olona ho lasa mpianatr’i Kristy? Nahoana?
Nahoana isika no mila manam-paharetana rehefa manao mpianatra?
HIRA 68 Afafazo ny Voan’ilay Fanjakana
^ feh. 5 Ny hanampy olona ho lasa mpianatr’i Kristy no tena tanjon’ny fiangonana kristianina. Misy soso-kevitra tena tsara ato amin’ity lahatsoratra ity mba hanampiana antsika hahavita an’izany.
^ feh. 2 FANAZAVANA: Tsy mianatra an’izay nampianarin’i Jesosy fotsiny ny mpianatr’i Kristy, fa mampihatra an’izany koa. Manao izay rehetra azo atao izy ireo mba hanarahana akaiky ny dian’i Jesosy, izany hoe ny modely nomeny.—1 Pet. 2:21.
^ feh. 52 SARY: Lehilahy iray handeha hanao vakansy. Maka taratasy mivalona eo amin’ny fampirantiana eny amin’ny seranam-piaramanidina izy. Mahita Vavolombelon’i Jehovah manao fampirantiana izy avy eo, rehefa mijerijery tanàna any amin’ilay toerana anaovany vakansy. Rehefa tafaverina any amin’ny taniny izy, dia misy mpitory tonga ao aminy.
^ feh. 54 SARY: Ilay lehilahy teo amin’ny sary teo aloha ihany. Mianatra Baiboly izy, dia avy eo atao batisa.